Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ụzọ 6 dị mfe iji nọrọ na nchekwa n'ịntanetị - UnMask Nov
Ịntanetị bụ ngwá ọrụ dị ịtụnanya nke gbanwere ụzọ anyị si azụ ahịa, na-ekwurịta okwu na ndị enyi na ezinụlọ, na-achọta ozi gbasara ụdị isiokwu niile, si otú a na-aghọ akụkụ bụ isi nke ndụ anyị kwa ụbọchị. Dị ka atụmatụ e mere, e nwere ugbu a ihe karịrị ijeri mmadụ abụọ na-eji ịntanetị eme ihe n’ụwa nile, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị bi ná mba ndị mepere emepe dị ka Australia, Canada, na New Zealand adịlarị n’Ịntanet. Nke ahụ bụ ọtụtụ mmadụ!
Agbanyeghị, otu mmetụta dị na nke a bụ na ọ nwere ike isi ike ichebe onwe gị mgbe ịnọ n'ịntanetị. N'isiokwu a, anyị ga-agafe ụzọ isii dị mfe maka ndị mmadụ ka ha nọrọ na nchekwa mgbe ha na-egwu net!
Jiri VPN mgbe ị nọ n'ịntanetị
VPN na-enye gị ohere izochi okporo ụzọ ịntanetị gị ma nọgide na-amaghị aha mgbe ị na-achọgharị weebụ. Netwọk nkeonwe mebere bụ ọwara echekwara n'etiti ebe abụọ dị iche iche na ịntanetị, nke na-enye ndị ọrụ ohere imeghe ọdịnaya amachibidoro geo site na ịpụta dị ka a ga-asị na ha nọ na obodo ọzọ. Site n'iji ọrụ VPN, ị nwere ike zoo ọnọdụ gị nke ọma ma debe ọrụ ịntanetị gị n'anya ndị ọzọ dị ka ISPs ma ọ bụ ndị na-agba ọsọ. Mgbe ejikọtara ya na ihe nkesa ọha na eze ọ bụla na-enweghị nchebe ezoro ezo, agbanyeghị, ihe niile onye mwakpo ga-enwe ike ịhụ bụ ozi ezoro ezo na-eziga azụ na azụ n'etiti onwe gị na webụsaịtị (s) nke ị na-achọ ịnweta site na sava proxy dị gburugburu. ụwa-ọ bụghị onye webụsaịtị ndị ahụ bụ n'ezie! Yabụ, site na ụdị usoro nchekwa a, ị nwere ike ijide n'aka na a ga-echekwa ozi nzuzo gị.
Jiri nyocha nke nzọụkwụ abụọ
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Gmail na akaụntụ Facebook jikọtara na otu adreesị ozi-e ahụ, mgbe ịbanye na ibe Akaụntụ Google, ị ga-abụ nhọrọ iji naanị otu ọpịpị na ekwentị gị banye maka ọrụ abụọ ahụ. Agbanyeghị, n'adịghị ka mgbake okwuntughe, nke na-eji naanị ajụjụ nyocha dị mfe, nyocha nzọụkwụ abụọ chọrọ ka itinye akara ekwentị gị. Mgbe ahụ, mgbe iji naanị otu ọpịpị na-abanye n'ọrụ ahụ, webụsaịtị ahụ ga-eziga koodu n'elu SMS ozugbo na ekwentị gị. Ozugbo ị nwere ike nweta ozi a nke ọma wee pịnye ya n'ụdị ha ibe akaụntụ Google, ị nwere ike ịbanye n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Nke a bụ naanị ihe atụ nke otú nyocha ụzọ abụọ na-arụ ọrụ maka akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ebe ọ bụ na ikpo okwu ọ bụla n'ịntanetị nwere ụzọ dị iche iche nke iji usoro nchekwa a ọzọ; Otú ọ dị, ha niile na-agbaso otu echiche ahụ dị ka akọwara n'elu ebe enwere usoro nchekwa dị mfe na nke dị elu jikọtara ọnụ nke na-enyere aka ichebe ozi nkeonwe site na ndị omekome na-eji malware ma ọ bụ na-ezu ohi okwuntughe site na mgbalị phishing.
Kpuchie na Weebụsaịtị enyo enyo
Ekwesịrị izere ebe nrụọrụ weebụ enyo n'ihi na ha nwere ọdịnaya na-emerụ ahụ ma ọ bụ malware nwere ike imerụ kọmputa gị ma ọ bụrụ na ịga na saịtị ndị a. Ihe atụ nke ebe nrụọrụ weebụ na-enyo enyo na-agụnye ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ọnụ ahịa "dị oke mma ịbụ eziokwu" ọnụahịa na mgbasa ozi maka ngwaahịa dị ka ngwọta ọnwụ nke na-ekwe nkwa nsonaazụ dị ịtụnanya na-enweghị mmega ahụ ma ọ bụ nri achọrọ. Ọtụtụ mgbe, naanị otu ụzọ isi chọpụta ma weebụsaịtị ọ dị mma bụ site na ịlele URL ya; ihe ọ bụla ọzọ nwere ike itinye njirimara gị n'ihe egwu wee bute kọmputa gị na ngwanrọ ọjọọ (malware). Ibe weebụ enyo enyo nwekwara ike ibugharị ndị ọrụ pụọ na ebe ha chọrọ site na mgbasa ozi nwere njikọ na-eduga na ibe adịghị mma, yabụ ọ dị mkpa ịlele ebe adreesị tupu ịpịa mgbasa ozi ọ bụla.
Iji chebe njirimara gị ma chekwaa nchekwa kọmputa gị, ọ kacha mma ka ị ghara ịga na webụsaịtị nwere ike itinye gị n'ihe ize ndụ nke malware ma ọ bụ ọrụ enyo ndị ọzọ. Nanị ụzọ ị ga-esi hụ na nchekwa dị n'ịntanetị bụ site na ịlele URL nke weebụsaịtị (ma ọ bụ adreesị weebụ); ma ọ bụghị ya, enwere ike ibugharị ndị ọrụ pụọ na ebe ha chọrọ site na mgbasa ozi nwere njikọ na-eduga na ibe adịghị mma. Ọ bụkwa omume dị mma ka ị ghara ịpị mgbasa ozi n'ihi na ndị a nwere ike iduga ndị ọrụ ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ dị ize ndụ nke nwere ike ibunye ngwaọrụ gị na ngwanrọ na-emerụ ahụ dị ka nje na spyware.
Kpachara anya maka ihe ị biputere n'ịntanetị
Jide n'aka na ị maara ihe ị na-ebipụta na ịntanetị. Nke a nwere ike ịdị ize ndụ n'ihi na enweghị ike ihichapụ ma ọ bụ weghachi ya ozugbo ihe ruru cyberspace. Ọ ga-ebi ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi maka onye ọ bụla ịhụ n'oge ọ bụla n'ọdịnihu. Ya mere, tupu ị biputere ihe ọ bụla nwere ike ịmetụta nzuzo ma ọ bụ nchekwa nke onye ọzọ, chee echiche otú nke a nwere ike isi metụta ha ogologo oge ma ọ bụrụ na ha ahụ ka ị biputere n'okporo ụzọ wee wesa gị iwe n'ime ya ọtụtụ afọ ka e mesịrị. Ị maghị onye nwere ike ịgụ ihe ị na-ede!
Anyị niile nwere ọrụ na-ọ bụla ọzọ mma, otú anyị ga-anọgide na-ahụ maka mgbe iji na-elekọta mmadụ media nyiwe dị ka Facebook, Twitter, wdg… Daalụ ịdị mma ọ dịghị ihe e dere na-adịgide adịgide, ma internet bụ ruo mgbe ebighị ebi!
Chee echiche ugboro abụọ tupu iji Wi-Fi ọha
Wi-Fi ọha dị oke egwu ma na-ebute ọtụtụ ihe egwu nchekwa. Mgbe ị na-ejikọ na netwọk ọha, enwere ike ikpughe data gị n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji njikọ ikuku anaghị echekwa, ị na-agba ọsọ nke inwe mmadụ soro ụdị weebụsaịtị ị gara, nke nwere ike itinye nzuzo gị n'ihe ize ndụ ma ọ bụ mee ka ha mechie ozi dị nro dị ka nọmba kaadị kredit nke enweghị ike ezoro ezo. Netwọk ọha na-enwekwa ike ịnweta mwakpo sitere n'aka ndị hackers bụ ndị nwere ike ịdọrọ akaụntụ ndị ọrụ aka ha dị ọcha ma ọ bụ gbasaa malware gburugburu site na ngwa ihe nchọgharị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na enweghị paswọọdụ na ebe a na-ekekọrịta Wi-Fi hotspot, ndị mmadụ agaghị ama ma ha na-ejikọta na netwọk ziri ezi. Nke a pụtara na ha nwere ike mechaa soro onye ga-ahụ data ahụ dị njọ, dị ka ọdụ ụgbọ elu, ụlọ ahịa kọfị ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Gbaa nyocha ndabere na onwe gị
Nyocha ndabere bụ nchịkọta ozi anakọtara site na ndekọ ọha. Akụkọ ndị a na-agụnyekarị akụkọ mpụ, kọntaktị, na ndị òtù ezinụlọ, yana nkọwa ndị ọzọ nwere ike imetụta nchekwa nke ndụ gị. Na-agba ọsọ a nyochaa ndabere na onwe gị nwere ike ịbụ ụzọ bara uru nke ukwuu iji chịkọta nghọta gbasara akara ukwu dijitalụ gị wee hụ na enweghị ajụjụ azaghị azịza, njedebe rụrụ arụ, ma ọ bụ chọpụta ozi nzuzo ọ bụla na-achọghị na ịntanetị.
Mgbe ị na-eme nyocha ndabere na onwe gị, ọ dị mkpa ịlaghachi azụ n'oge dị ka o kwere mee. Nke a ga-enye ohere maka echiche zuru oke nke oge gara aga ma gbochie ozi ọ bụla nwere ike imebi site na ịbịpụta mgbe e mesịrị n'okporo ụzọ nke nwere ike ịkpata nsogbu na ohere n'ọdịnihu dị ka ịnweta ụlọ, ọrụ, ma ọ bụ ọbụna ịmalite mmekọrịta ọhụrụ.
N'ụwa taa, ịntanetị bụ akụkụ ndụ nke ọtụtụ mmadụ kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọ na-enye ọtụtụ uru na ịdị mma nye ndị ọrụ, enwekwara ihe ize ndụ ndị na-abịa na iji ọrụ ịntanetị.
Ụfọdụ n'ime ihe iyi egwu a na-ahụkarị gụnyere nje virus, malware, na phishing. Ndị na-egwu hackers nwekwara ike butere ndị ọrụ ihe egwu site n'itinye n'ime ngwaọrụ ha n'enweghị ikike ma ọ bụ zuru ozi nkeonwe dị ka okwuntughe na nọmba kaadị kredit. N'agbanyeghị ọdịnaya ị na-achọ n'ịntanetị, ọ dị oke mkpa ịmara ihe egwu ndị a ịghara imetụta ahụmịhe ịntanetị gị.